प्रदेश सांसदले , कहिले र कति पाउँछन् तलब ? | Sindhuli Saugat
प्रदेश सांसदले , कहिले र कति पाउँछन् तलब ?
संघीयतामा कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा केन्द्रमा रहेको शक्ति विकेन्द्रिकृत हुँदैछ । प्रदेश–प्रदेशमा संसद स्थापना भएको छ, सरकारहरु बन्ने चरणमा छन् ।
पछिल्लाे - पकेटको किसान व्लक तर्फ उक्लदै
अघिल्लाे - क्षयरोग परीक्षण शिविर सुरु